Coronavirus ကို ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲ ...... - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း » ကျန်းမာခြင်းနည်းလမ်းများ » Coronavirus ကို ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲ ……
မကြာသေးခင်က တရုတ်နိုင်ငံမှာ စတင်ဖြစ်ပွားတဲ့ ပြင်းထန်အဆုတ်ရောင်ရောဂါပိုး (Coronavirus) ဟာအခုချိန်မှာဆိုရင် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေဆီ အထိပြန့်နှံ့နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုနောက်ဆုံး ထိုင်းနိုင်ငံမှာ Coronavirus ကူးစက်ခံထားရသူတစ်ဦး နဲ့ ဂျပန်မှာ ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံထားရသူတစ်ဦးတို့ကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလိုတွေ့ရှိပြီးနောက်မှာ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ကြီးက ကမ္ဘာတလွှားကို ဒီရောဂါပိုးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
အစောပိုင်းက ဒီရောဂါပိုးဟာ တိရစ္ဆာန်ကနေတဆင့် ကူးစက်တာလို့သိထားကြပေမယ့် အခုနောက်ဆုံးတွေ့ရှိခဲ့ရတာက ဒီရောဂါပိုးဟာ လူလူချင်းကူးစက်တာဖြစ်နိုင်တယ်၊ လို့ တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတရုတ်နိုင်ငံမှာ ဒီရောဂါကူးစက်ခံရသူ ၄၁ ဦးရှိခဲ့ပြီး ဒီလူတွေထဲက ၁ ဦးက သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ဒီရောဂါပိုးဟာ တရုတ်နိုင်ငံကနေ စတင်ခဲ့ပြီး အခုလက်ရှိမှာ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေဆီပြန့်နှံ့လာတာကြောင့် စိုးရိမ်စရာအနေအထားကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ အခုလက်ရှိမှာ ဒီဗိုင်းရပ်စ်က တရုတ်ကနေ ဂျပန်ကိုပြန့်နှံ့သွားတာကြောင့် လေဆိပ်မှာ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေကြပါတယ်။
Coronavirus က ပြင်းထန်ကူးစက်ရောဂါပိုး တစ်မျိုးပါ။ ဒီ Coronavirus ဟာ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) နဲ့ Middle East Respiratory Syndrome (MERS) တို့နဲ့ မျိုးရင်းတူတယ်လို့ ယူဆနေကြပါတယ်။ ဒီရောဂါပိုးက အခုဆိုရင် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေဆီကို ပြန့်နှံမှုတွေရှိနေတကြောင့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ ကာကွယ်ဖို့ပါ။
ဖျားပြီး ၂ ရက် ကနေ ၇ ရက်ကြာတဲ့အခါ ချောင်းခြောက်ဆိုးမယ်
အစာအိမ် အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေခံစားရနိုင်တယ်
ဒီဗိုင်းရပ်စ်က အရမ်းမပြင်းထန်တဲ့အခါမျိုးမှာ သူ့အလိုလိုပြန်ကောင်းလာတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုလေး ဂရုစိုက်ဖိုပတော့လိုပါမယ်။
အစိုဓာတ်ထိန်းစက်ဖွင့်ထားတဲ့ အခန်းထဲမှာ အနားယူပေးပါ
အိမ်မှာ သက်တောင့်သက်သာ အနားယူပါ
How isacoronavirus infection treated? https://www.webmd.com/lung/qa/how-is-a-coronavirus-infection-treated Accessed Date 22 January 2020
Prevention and Treatment https://www.cdc.gov/coronavirus/about/prevention.html Accessed Date 22 January 2020
WHO Warns Against Deadly Chinese Virus ‘Coronavirus’ That Has Now Reached Japan https://www.onlymyhealth.com/who-warns-against-deadly-chinese-virus-coronavirus-1579240273 Accessed Date 22 January 2020
What is coronavirus, and should Americans be worried? What to know about the outbreak in China https://www.usatoday.com/story/news/world/2020/01/21/china-coronavirus-outbreak-symptoms-transmission-cdc-sars/4528555002/ Accessed Date 22 January 2020